Doorasho deg deg ah oo maanta ka dhacday magaalada Jowhar | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Doorasho deg deg ah oo maanta ka dhacday magaalada Jowhar
Doorasho deg deg ah oo maanta ka dhacday magaalada Jowhar
Wasiirka Dhallinyarada iyo Ciyaaraha ee Xukuumadda Soomaaliya Max’ed C/Lahhi Xasan Nuux, ayaa ku guuleystay doorasho kadis ahayd oo maanta ka dhacday Magaalada Jowhar ee Xarunta Maamulka Hirshabeelle.
Doorashada ayaa la qabtay xilli hore oo maabta ah sida ay ku waramayaan xogaha Xaqiiqatimes uu ka helayo halkaasi.
Wasiir Nuux, ayaa waxaa la tartantay Gabar lagu magacaabo Hinda C/llaahi Cumar, taas oo heshay 5 cod kaliya halka Nuux uu ka helay 45 cod midna hallaabay.
Guddiga Doorashada dadban ee Heer Federaal ayaa horay wasiir Nuux iyo musharrax la tartamayay ka reebay doorashada kadib markii ay ku lugyeesheen israsaaseyn ka dhacday goobta doorashjada oo ay dad ku dhinteen 18kii November.
Wali kama hadlin Guddiga doorashad heer Federaal doorashada saaka uu ku soobaxay Nuux oo horay tartankan looga reebay waxaana ay tani u muuqataa la hareer marayo sharciyada doorashada ee uu degsan Guddiga.
Kursi kale ayaa isna saaka doorashadiisa ka dhacday Magaalada Jowhar,waxaana ku guuleystay C/casiis Saalax Carmaan oo ahaa wasiir ku xigeenkii Beeraha.
Kursigan waxaa laga wareejiyay Muqdisho,waxaana ika leh Beesh Carab Somaali kaas oo uu dhawaanahan muran ka taagnaa halka lagu qabanayo.
Previous articleMusharax wax laga xumaado ku tilmaamay go’aankii Madasha Qaranka
Next articleAMISOM and Somali government to involve local leaders in fighting recruitment of child soldiers by arm